ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များ | USAHello ထံမှအရင်းအမြစ်များ | USAHello
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များနှင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များစွာကွဲပြားခြားနားသောမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကျော်ပြန့်နှံ့နေကြတယ်. သို့သော်ရှိသမျှသောအလုပ်အကိုင်များအရေးကြီးသောန်ဆောင်မှုများပေး. ဤရွေ့ကားအလုပ်အကိုင်များသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထံမှ hairdressing နှင့်ကလေးများပြီးနောက်ရှာနေဖို့အရာအားလုံးပါဝင်သည်. ဒီမျိုးအတော်များများကဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးမလိုအပ်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလွန်ကောင်းစွာပေးဆောင်မဟုတ်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်အလုပ်အများကြီးကိုအကြွင်းမဲ့ကြီးထွားလာလယ်ကွင်းများမှာ. ဒီအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်:
ပြည်သူ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် ပို. ပို. အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြတယ်.
တိရိစ္ဆာန်အိမ်စောင့် - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစောင့်ရှောက်တာတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းကိုခံစားသောလူများအတွက်တိုးချဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်.
အမှုထမ်း - အမှုထမ်းအစေခံခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှာအများပြည်သူပဲ့ပြင်, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, နှင့်အပန်းဖြေဥယျာဉ်များ.
ကလေးထိန်း - daycare စင်တာများအတွက်ကလေးထိန်းလုပ်သားများဝယ်လိုအား, ကျောင်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များကြီးထွားလာနေသည်.
Cosmetologist - လူတွေရဲ့အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုတာနဲ့အလှအပကုသမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်.
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အပန်းဖြေ - ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းပို့ချနှင့်အပန်းဖြေခေါင်းဆောင်များအလုပ်နှစ်ခုစလုံးကြီးထွားလာလယ်ကွင်းများမှာ.
ဆံပင် stylist - ဆံပင်ဖြတ်တောက်နှင့် styling သင်တန်းနှင့်ပြည်နယ်-by-ပြည်နယ်လက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်.
နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းသူများနှင့်အိမ်ဖော် - ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များနှင့်ဟိုတယ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်သူတွေကိုနှင့်အခြားပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများကိုမကြာခဏမရောမနှောနတေတျသောနာရီအလုပ်လုပ်ရန်ရန်ရှိသည်.
တံခါးစောင့် - ကြီးမားသောအဆောက်အဦးများအတွက်ပိုမိုလေးလံသန့်ရှင်းရေးတာဝန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်သူတွေကို. ဒါဟာနေရာလွတ်များကြီးထွားလာနံပါတ်များရှိပါတယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်.
ရှုခင်းနှင့်ဥယျာဉ်မှူး - အလုပ်အပြင်ဘက်ကိုက်ခြင်းနှင့်ပိုကြီးတဲ့ရှုခင်းဒေသများထိန်းခြင်းနှင့်ကို, ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအဆောက်အဦးပတ်ပတ်လည်အများပြည်သူပန်းခြံများနှင့်ဒေသများအဖြစ်.
Manicurist / pedicurist - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်သည်းလုပ်သားများသင်တန်းနှင့်အချို့သောလက်မှတ်တောင်းမည်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သား (စောင့်ရှောက်သူများ) - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုသူတွေကိုပြီးနောက်ရှာဖွေနေ, ထိုကဲ့သို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများအဖြစ်. ဒီတစ်ခုအမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါသည်.
ကြီးကြပ်သူ - လူအတော်များများထိန်းသိမ်း, Landscaping နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအသင်းများကိုမိမိတို့၏အလုပ် coordinate နှင့်စောင့်ကြည့်သူကိုကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်မန်နေဂျာများ.
ဤရွေ့ကားအလုပ်အကိုင်များအလွန်ကွဲပြားကြသည်, ဒါကြောင့်အများအပြားလယ်ကွင်းများထဲမှသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်ဖြစ်မည်အကြောင်း. သင်တို့သည်ဤစားပွဲပေါ်မှာအလုပ်အကိုင်များမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအထက်ပါစာရင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းကနေမြင်ရပါလိမ့်မည်. သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ရုံးထဲမှာဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းချင်ပါဘူးသူတစ်ဦးနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟု. သူတို့ထဲကတချို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေအများကြီးလိုအပ်, ထိုကဲ့သို့သောတံခါးစောင့်အဖြစ်, ဉယျာဉ်မှူး, နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြဆရာ.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကလေးထိန်းအလုပ်အကိုင်များဒီတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်. သူတို့ကလူနာနှင့်အမျိုးများမှာအခြားသူများအတွက်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အဘယ်သူတူနှင့်သူတွေကိုကိုက်ညီ. လက်ထောက်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အချို့သောရုံးသန့်ရှင်းရေးအလုပ်အကိုင်များညဦးယံ၌အလုပ်ဖို့လိုအပ်သူကျောင်းသားများသို့မဟုတ်အခြားသူများအဘို့ကောင်းသောများမှာ. ဆံပင်ပုံစံ, အလှတရားန်ဆောင်မှုများ, နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်န်ဆောင်မှုများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလိုလားသူတစ်ဦးအဘို့ကောင်းသောလိမ့်မယ်.
Buffalo တစ်ဦးအလှတရားဆိုင်ပိုင်ရှင် Watch, နယူးယောက်, နှင့်အခြားဟောင်းတဦးဒုက္ခသည်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်အကြောင်းပြောဆို
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သင်သည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းသင်၏ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီကိုတောင်းစတင်နိုင်ပါသည်. အတော်များများကပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်လူဝင်မှုအဖွဲ့အစည်းများသည်ဒေသခံအလုပ်ရှင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိ, ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်များအဖြစ်. သူတို့ထဲကတချို့ကအရမ်းအလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုပူဇော်. FindHello နှင့်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အဖွဲ့အစည်းများ Find.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များမဆိုလေ့ကျင့်ရေးမလိုအပ်ပါဘူး. ဥပမာ, သစ်တစ်ခုဟိုတယ်အိမ်အကူသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်အားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပါလိမ့်မည်. ဒုက္ခသည်များအလုပ်သမားတစ်ဦးစမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်နေတဲ့ဟိုတယ်နှင့် ပတ်သက်. Read.
သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များတချို့လေ့ကျင့်ရေးတောင်းမည်. ရပ်ရွာကောလိပ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စနစ်သင်တန်းများပူဇော်တံခါးစောင့်အဘို့အအသုံးဝင်သောများမှာ. သူတို့ကအစ Landscaping အတွက်သင်တန်းများပူဇော်, ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှု. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
အများအပြားပုဂ္ဂလိကဆံပင်နှင့်အလှအပကျောင်းများတွင်လည်းရှိပါတယ်. Cosmetology ကျောင်းများ၏အမေရိကန်အသင်းကအတည်ပြုကြောင်းတမျှော်. သံမှို, ဆံပင်နှင့်အလှပညာရှင်များ, သူတို့ပြည်နယ်အတွက်လိုင်စင်ရမည်ဖြစ်သည်.
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလိုင်စင်ကိုရှာဖွေ နှင့်သင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ဆံပင်နှင့်အလှအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီး.
သင်တစ်ဦးကလေးထိန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်မဟုတ်လျှင်ကိုသင်အိမ်မှာသားသမီးများ၏ဂရုစိုက်ဖို့လိုင်စင်မလိုအပ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းမှသင်တန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသငျသညျအလုပျတကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါ. ကြက်ခြေနီသင်အွန်လိုင်းလုပျနိုငျအနေနဲ့အဆင့်မြင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရှိမည်. အကြောင်းကိုလေ့လာပါ ကြက်ခြေနီအွန်လိုင်းကလေးထိန်းလေ့ကျင့်ရေး advanced.
သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်ကနေအရည်အချင်းများသို့မဟုတ်တစ်ဒီဂရီရှိပါက, Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.
သင်ကူညီမရှိအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းမရှိဆိုပါက, သငျသညျအလုပျသမားအမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားများမှာဘယ်မှာအလုပ်အကိုင်များများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်. အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုရှာပါ.